Indibano ekhawulezileyo yokuHlanganisa i-Flat Pack Container yehotele-indlu e-Prefab-NANTONG GAOYA STEEL STRUCTURE CO., LTD.
Iphaneli yeSandwich kunye nePhepha leNtsimbi
Icandelo lesinyithi （H, Ndi）
Nantong GAOYA UBUME SENTSIMBI CO., LTD.
I-NANTONG GAOYA KWI-INTERNATIONAL TRADING CO.LTD. Abasingatha ukudizayina,ukuvelisa nokufakela iintlobo zezakhiwo,nezinye series.
Umphandle>Products>ababulawayo>Ukulungisa indlu ngaphambili
Ukulungisa indlu ngaphambili
Vukani Mthimkhulu Building
Ngokukhawuleza Hlanganisa iMigangatho emiThathu yeFlethi yePakethi yeSitya
Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa isikhongozeli esineplanga yokwakha ihotele
Ukuhambisa izitya kusetyenziselwa ukuhambisa ngokukhuselekileyo iimpahla kunye nemithwalo kwihlabathi liphela. Indawo eyomeleleyo neyomeleleyo. Isitya sopakisho olucwangcisiweyo yavela kwisikhongozeli sokuhambisa.
Ubume be-cuboid yesikhongozeli seplati enika umyili iindidi ezahlukeneyo zokhetho kuyilo lwendawo, kwaye unokudibanisa okuninzi kunye notshintsho. ngoko ke, inkangeleko yayo ihlala itsala uninzi lwabayili bezobugcisa ukuba baphonononge izinto ezinokwenzeka kwaye bahlala bebeka phambili izinto ezintsha ezinokwenzeka. Isikhongozeli sokupakisha kulula ukusithutha kwaye sinokuziqhelanisa nayo nayiphi na imeko. Inokudityaniswa ngempumelelo kwiindidi ezahlukeneyo zesithuba, ezifana neehotele, iihostele, makhaya, etc.
Kuyaziwa ukuba ipakethi yesitya ephethe ihotele izise uncedo olukhulu kubomi bethu. Kunokuthiwa imveliso entsha yongezwe kwishishini lokwakha. Iipakethi zepakethi ezithe tyaba ziphuhlise kakuhle kakhulu kumzi-mveliso wokwakha kwaye zithandwa ngabantu. Ngoku iihotele ezininzi ziya kwenza ihotele yazo eyahlukileyo epakisha iipakethi. Ke zeziphi izibonelelo ezilolu hlobo lwepakethi yesitya esinezipakethe zokuba abantu mabazilandele?
Ekuqaleni, Izinto zizinzile kwaye akukho lula ukuzilungisa
Isikhongozeli esithe tyaba esisetyenziswa yihotele senziwe ngentsimbi, enokuxhathisa ngamandla kwiintlekele zendalo kwaye ayizukukhubazeka. Umyili unokuyila indlu eyodwa ngokweengcinga zakhe, enokutsala abakhenkethi ukuba bahlale kuyo.
Isibini, ine-teknoloji yokuvelisa engqongqo
Isakhiwo sendabuko sinokubonakala sihamba ngokuhamba emva kwexesha elide lokusetyenziswa, kodwa indlu eyenziwe yipakethe yesikhongozeli seteknoloji inezobuchwephesha bokuvelisa ngokungqongqo, eya kwenza ukuba olu hlobo lwendlu eshukumayo ibonakale ukusebenza ngokutywina okungcono, kwaye akusayi kubakho kuvuza kwamanzi ngexesha leemvula.
Isithathu, ukusetyenziswa rhoqo kuphezulu
Indawo yokupakisha ipakethi yesitya sisebenzisa isinyithi njenge-chassis, kwaye ke ufumane iintlobo zokudityaniswa kwezithuba ngokwendlela yoyilo yehotele nganye, akunamsebenzi nokuba ubungakanani bunokwenziwa njani, inokuhlangabezana neemfuno zomsebenzisi ngamnye, kunye nokudala ipakethe yesakhiwo esipheleleyo seplanethi isakhiwo sokucwangcisa kuya kwenza ubomi benkonzo bube lude.
Isine, ukhuseleko lwezoqoqosho kunye nokusingqongileyo
Ukusetyenziswa kwezikhongozeli ezikumgangatho ophezulu eziflethi akunakuphelisa nje lonke ixesha lokwakha kodwa kukonga iindleko ezingaphezulu. Ekugcineni, ukuba awusebenzisi, Unokudibanisa kunye nokurisayikilisha, ebaluleke kakhulu kukhuseleko lokusingqongileyo esilusebenzisayo.
IGaoya inesiseko sayo semveliso kunye neqela lobuchule kulwakhiwo. Sizimisele ikakhulu kuphuhliso nolwakhiwo lwezakhiwo zentsimbi kunye nokwazisa kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zokwakha ezintsha. Iqela lenkampani lamkela iikhonsepthi zokwakha zasekhaya nakwamanye amazwe, ngokungqinelana noyilo lwesakhiwo sentsimbi kunye nemigangatho yokwakha kwaye isebenzisa izinto zodonga ezintsha ukwenza izindlu zokwakha zamva nje zabathengi, nokubonelela ngeyona teknoloji kunye nezisombululo zokwakha; committed to China's green environmental protection Housing construction, ukwenza okona kulondolozwa kwamandla kunye nolondolozo lwendalo.
ibandla Easy ezinemigangatho emibini container indlu
Umbala wekhoyili oMiselweyo (I-PPGI)
Copyright © Nantong GAOYA UBUME SENTSIMBI CO., LTD.. Inkxaso kaMeeall